ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5အောင်မြင်တဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏လုပ်ရန်နှင့်မလုပ်ရန်
အားဖြင့် ဧပြီလ Aragam
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 20 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လူသစ်တွေ့ဆုံရန်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတော့မည်. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့, အရာအားလုံးထက်တူ, ၎င်း၏ positive နဲ့ negative အချက်များကိုရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်ကိုကိုယ်အဘို့အောင်မြင်မှုဖြစ်စေနိုင်? ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီး5သင်အနည်းငယ်ပိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ navigate ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုနှင့်လုပ်ရန်ပြုပါ.
တစ်ဦးချိန်းတွေ့ profile တွင်မေးခွန်းများကိုဖြေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာင်. ဤလူမျိုးသည်သင့်အကြောင်းနည်းနည်းလေ့လာသင်ယူရပထမဦးဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးဇာတ်လမ်းကိုပြောပြနေစရာမလိုပါ, သင်မူကား, အနည်းဆုံးစုံတွဲသည်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များပေးချင်ကြဘူး. ငါအကြောင်းအပိုင်းကိုချီးမွမ်းထဲမှာသင်ကသင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိဖော်ပြထားခြင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းကိုသွားချင်တဲ့, သင်သည်သင်၏အားလပ်ချိန်ကိုအဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်ပျော်မွေ့, နှင့်သင်ကအခြားလူမျိုးမှဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်နှိမ့်ချမယ့် bit နဲ့ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုဖော်ပြထားခြင်း. သင်သည်နှစ်ကြိမ်တစ်လတစ်ဦးဟင်းချိုမီးဖိုချောင်မှာစေတနာ့ Do? သင်သာဂန္ဖတ်တယ်တဲ့စာအုပ်ကလပ်ပိုင်ပါနဲ့? ကဖော်ပြထားခြင်း! ဒါဟာသင့်အားအနည်းငယ်အရာနှင့်တူသယောင်ထင်ရသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုဖတ်ရှုခြင်းတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ကိုအခြားသူများထံမှထွက်မတ်တပ်ရပ်ကူညီပေးပါမည်.
သင်ကရှောင်တခင်ကြားဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်တစ်ခုခုပိုပြီးရေရှည်ရှာနေတော့မည်လားဖော်ပြရန်ဿုံကောင်းဒါဟာင်. သင့်အနေဖြင့်တူညီသောအရာလိုသူတစ်ဦးဦးနှင့်တွေ့ဆုံချင်တယ်. သင်အတူတကွသင်ပထမဦးဆုံးခရစ္စမတ်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြောနေတာကိုစတင်ရန်ဆိုရင်, အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုမင်္ဂလာဆောင်ကိုသင်တို့အား၏အိပ်မက်မက်ခဲ့ကြရတယ်, သို့မဟုတ်သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဘယ်လိုကလေးတွေအများကြီး, သင်အလားအလာရက်စွဲများကိုချွတ်တွှေတာပေါ့. သင်ပိုမိုလေးနက်သောဖြစ်လာပါတယ်သည့်အခါနောက်ပိုင်းတွင်အဲဒီစကားပြောဆိုချက်တွေကို Leave.
၏: မကြာသေးမီဓာတ်ပုံများ Add
သင် bombshel​​l တူခံစားဖန်ဆင်းတော်မူသောပန်းခြံတွင်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်သိမ်းယူသင်၏ဓာတ်ပုံပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုသောမကြာသေးမီဓာတ်ပုံကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်. လူတွေဟာသင့်ကိုသင်နေဆဲအလွန်ဟောင်းနွမ်းဓာတ်ပုံတူအောင်ငြင်းခုံစရာပင်သော်လည်းအချိန်နှင့်အမျှပြောင်းလဲပစ်. သင့်ရဲ့ဆံပင်အရောင်, အရှည်, နှင့်စတိုင်ဖြစ်နိုင်ပြောင်းလဲပြီ. သင်သည်အနည်းငယ်ပေါင်ပေါ်ကျဆင်းခဲ့သို့မဟုတ်သွင်းထားပြီနိုင်ပါသည်. တောင်မှသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစတိုင်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြပေမည်. သင်ကဓာတ်ပုံတင်သူတစ်ဦးအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းလျှင်, သင်သည်သူတို့ဓာတ်ပုံအတွင်းလူတစ်ဦးမျှော်လင့်ရတော့မှာကိုသိ. သင်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦးတစ်ဦးသူအနည်းငယ်ပိုဆံပင်ရာနှစ်ခုနှစ်အရွယ်ဓါတ်ပုံနဲ့အနည်းငယ်လျော့နည်းသည်ဝမ်းကိုတက်ခဲ့လျှင်သင်မည်သို့ခံစားရမည်အကြောင်းစဉ်းစားပါ. သူတို့ကအစည်းအဝေးနေသောကိုသိလိုဖို့လူတွေကိုအပေါ်ယံလုပ်မထားဘူး.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များလူသစ်တွေ့ဆုံရန်နေရာကောင်းတခုဖြစ်နိုင်, သင်မူကား, ဖြစ်ကောင်းဆက်ဆံရေးအဆုံးပိုင်းလအတွက်အွန်လိုင်းနေဖို့လိုမှမဟုတ်ကြဘူး. အွန်လိုင်းကနေလူတစ်ဦးအတွက်သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအသစ်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါဟာင်. သင်သည်အီးမေးလ်များနှင့်စာသားများဖလှယ်ကြပြီးပြီပြီးတာနဲ့သင် next step ကိုရွှေ့နိုင်, ဖုန်းထဲမှာစကားပြောနေသော. သင်ဆဲ connection ကိုခံစားရနှင့်တွေ့ဆုံရန်ချင်တယ်ဆိုရင်, နေ့စွဲပါစေ! သင်နှင့်ဝေးကွာသောနေထိုင်ပြီးရုံချင်းစီကတခြားခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကိုမောင်းမနိုင်လျှင်, အနည်းဆုံး Skype ကိုသင်လုပ်နိုင်သည့်တိုင်အောင်.
သင်သည်ကြောင့်ဟုသူကပြောသည်င်တစ်ခုခုသို့မဟုတ်မှာ background လုပ်နေတာကတဆင့်တစ်စုံတစ်ယောက်အကြောင်းကိုရယ်စရာခံစားမှုရလျှင်သင်တက် add မဟုတ်သောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေး, ခံစားချက်ယုံကြည်စိတ်ချရ. စင်စစ်ယင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများမေးနိုင်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုချွတ်သည်ကဲ့သို့သင်တို့နေဆဲခံစားရလျှင်, ဒါကြောင့်သွားကို back နှင့်လူသစ်ဖြည့်ဆည်းဖို့အချိန်င်. သင်သည်မုသာစကားနှင့်အချက်အလက်များထုတ် sorting ဆက်ဆံရေးအသစ်၏အစအဦးဖြုန်းချင်တဲ့နှင့်သူ၏ခံတွင်းထဲကထုတ်မယ့်အရာတစ်ခု untruth လျှင်အမြဲတစေအံ့သြပါဘူး. အမြဲတမ်းအသင့်အူခံစားချက်ယုံကြည်စိတ်ချရ.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အမြဲတမ်းချောမွေ့စွာစီးနင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. အကယ်. နောက်အချိန်များအတွက်အမှားတွေလုပ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသိပါလိမ့်မယ်.